Wararka Maanta: Khamiis, May 10, 2012-Dagaal khasaare geystay oo Ciidamada Dowladda KMG, kuwa Itoobiya iyo Al-shabaab ku dhexmaray Gobolka Bakool
Dagaalkan ayaa qarxay markii ciidamada DKMG iyo kuwa Itoobiya ay weerarro ku qaadeen shalay gallinkii dambe saldhigyo ay xoogagga Al-shabaab ku lahaayeen halka uu dagaalku ka dhacay.
"Weerarka innaga ayaa qaadnay waxaana ku dilnay ciidammo badan oo Al-shabaab ka tirsanaa, dhankeennana khasaaruhu aad ayuu u yaraa," ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Bakool ee dowladda KMG ah.
Xildhibaanno ku sugan degmada Xudur ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid looga hortagayay weerarro ay Al-shabaab kusoo qaaddo degmada, iyagoo sheegay inay ka dileen Al-shabaab in ka badan 10-dagaalyahan.
Dhanka kale, saraakiil u hadlay Al-shabaab ayaa iyaguna sheegay inay weerarkaas iska difaaceen, inkastoo aysan sheegin khasaare ay u geysteen ciidamadii isbahaysiga ahaa iyo khasaare dhankooda soo gaaray.
Goobjoogayaal ku sugan deegaanno ku dhow halka lagu dagaalamay ayaa sheegay in labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka culus iyo midka fudud, waxayna xaqiijiyeen inay arkeen maydadka tobanka qof ee lagu dilay dagaalka.
Deegaankii lagu dagaalamay ayaa waxaa weli ku sugan xoogaggii Al-shabaab, iyadoo mas'uuliyiinta gobolka Bakool ay sheegeen inay qorshayaan weerar kale oo ay deegaankaas ku qaadaan.
Degmada Xudur oo 480-km u jirta Muqdisho ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya, iyagoo kala wareegay bishii Maarso ee sannadkan xoogagga Al-shabaab oo muddo sannado ah ka talinayay.
5/10/2012 3:47 AM EST